Mutungamiri Kubva Semalt: Nhanhatu Dzakagadzirirwa Kuita Mawebhusayithi Yenyaya
Zvinowanzoomera vadzidzisi vewebhu kuti vagadzire nekuvandudza zvinyorwa zvevashandi vavo,paanenge achibatana nevamwe. Zvisinei, ichi chichiri nguva dzose kugoneka kutarisira webhutiro zvakagadzirwa zvakanaka
Max Bell, Mutengi weKuteresi Achibudirira we Semalt ,mazano anotevera mapfumbamwe mapfumbamwe semutungamiri wekutora nekubudisa zvinyorwa zvakanaka
1. Ongorora Current Copy
Pasati pane chimwe chinhu, kuongororwa kwekopi ikozvino kuchenjera sezvazvinoratidzazvikanganiso kana zvinhu zvinoda kuongororwa. Kurongedza zvinyorwa uye kugovera zvinangwa zvakananga zvezvikwata izvi zvinoita kuti zvive nyorechengetedza kuti nzvimbo yacho inopa mashoko anokosha chete.
2 - gestion de ressources projet. Ziva Vateereri Vanotarisira
Bhizinesi rinofanira kuziva kuti ndiani ari kutaura naye asati agadzira zvinyorwa. Kunzwisisakana kuti kuzivikanwa nevanotarirwa nevateereri vanobatsira kupa pachena pakuronga. Icho chinotarisa kana iwe ruzivo rwaanoda kuisainokosha kana zvakajeka zvakakwana. Inotarisawo vateereri vekutanga, vekupedzisira, uye vepamusoro kuti vaone kuti nzvimbo yacho inowana vosevashanyi varo.
3. Shandisa Sitemaps
Sitemaps inoshanda sezvinyorwa. Pasina iyo, nzvimbo inogona kunge isina kuzadzisa zvinangwa zvayokana kugovera zvinyorwa kune peji rakakodzera. Mipurogiramu yakawanda yakasiyana neyezvikwata zvepurogiramu zviripo kuti ibatsire kugadzira uye kuronga ruzivo pamusoro pewebsite. Mienzaniso yakadaro yakafanana neChirongwa Chesangano muMicrosoft Word uye zvigadzirwa zvepachena-platform XMind. Tanga nehuwanduzvakagutsikana kuona kana peji imwe chete inogona kuva nezvose kana inoda zvidzidzo. Nokuita zvose izvi, zvinoita kuti zvigone kuisa mberi uyeRuramisazve zvinhu pawebsite.
4. Kushamwaridzana nevamwe
Kuita vamwe vanhu mukudzokorora nekugadzirisa kunovimbisa kuti zvinyorwa zvinekwete zvikanganiso zvegiramita uye zvinonzwisisika kune vamwe. Kubatana kunobvumira mamwe mapato kupa. Dhawusi dzisina kushandiswa kwezvose zvinogadzirisa chikamumukana wekubatana uku uye zvigadzirwa zvevashandi vanoda kuzvidzivirira. Google Docs uye JumpChart pane zvinyorwa zvewebsite zvakabatanamidziyo inobvumira vashandi vakawanda kupa mhinduro.
5. Kutaurirana Kusiyana Nekutengesa Nyaya
Vamwe vanhu vanofunga kuti mawebsite avo anopa mukana wekutaura nezvebhizimisinhau. Kusiyana neizvi, inofanira kureva nyaya dzevamwe vanhu avo vangave vakabatsirwa nekubatana nemishonga kana masanganoyakapiwa panzvimbo iyi. Zvose zvinokosha ndeyeuchapupu uye zvakataurwa nenzira inonzwisisika. Chibereko kana basa rinofanira kuzadza gaka rinodikanwa,nemashoko anyore-ku-kuverenga sezvikomborero zvinowanikwa kumunhu.
6. Nyora Vanhu uye Tsvagai Injini
Bhizimisi harifaniri kuisa mamwe mazwi makuru muhutano, kusvika pakuti inoperazvarinoreva kana kuti isingaverengeki. Kusanganisira aya mazwi mumutauro wose unoita kuti vaverengi vaone zviri mukati. Uyewo,uchishandisa semantic keywords kuti uite chinangwa chemashoko makuru haashanduri chinangwa chepakutanga chezvinhu.
7. Ita Chiito Chakatemerwa Kukopa
Pakuguma kwezvakanyorwa, panofanira kuva nekutaurira vatenzi chiito cheiivo vanofanira kutora zvakatevera. An e-mail kana kuti tsamba pekubatanidza tsamba inoita kuti zvive nyore kune vatengi apo bhizimisi richiri pamusorozvepfungwa dzavo.
8. Kuzviratidza Kuonekwa
Kubatanidza kushandira mifananidzo, marati, uye mifananidzo zvinotsigira kuti ikopirinotarisa rakanaka sezvarinobatsira. Kuputsa zvinyorwa zvakakura kudhonza zvinyorwa kana zvipupuriro, kana kushandisa mabhodhi mazita zvinouya zvakanyanya kune vashandisiiyo inosarudza kutarisa mumagwaro. Rudzi rwekopi rine basa rinokosha rinogona kutarirwa mukuvimbisa kuti kune kodzero yekopi yacho.
Kugadzirisa zvikwangwani zvemazuva evanhu uye mapoka anovimbisa kuti mapurojekitiramba uri munzira. Imwe nzira yekuita izvi ndechekuita boka rekugadzirwa kwezvinhu zvakakodzera chunks uye kushanda pane imwe panguva. Icho chinenge chikamuinofanira kunge iri pakati pekutanga sezvo inogadzirisa inzwi uye ichinyatsoziva kuti chii chinofanira kutarisa sezvo basa iri richifambira mberi. Deadline kubatsira kusimbisanguva yekuisa pasi basa rekuongororwa nevabatanidzwa, uye nguva yekuunganidza zvese zviri mukati muiti.
Urongwa hwehutano hunoda nguva yekugadzirira nekushandisa sarudzo. Throughnenzira iyi, zvinoita kuti zvive nyore kuratidza unhu nehukanganiso-pasina zvekushandisa panzvimbo.